Yamuna Online Clinic ယမုန်နာ ဆေးခန်း: 24-4-2013 Baby # 299 was born at 2:17 AM
24-4-2013 Baby # 299 was born at 2:17 AM
From Than Mawi and Biak Lian Thang, an alive female baby was born at 2:17 AM. This is baby # 299 delivered at the clinic.
Photo by Venus Ni Ni
အခန်းကျဉ်းလေးထဲက ကုတင်သေးနှစ်ခုမှာ မွေးလူနာ တယောက်စီ၊ နာရီက သန်းခေါင်ကျော်ပြီ။ ခြင်တွေကလည်း တဝီဝီ၊ ကလေး ၃ဝဝ ပြည့်တော့မည်။ ဆရာမလေးတွေက အိပ်ချင်စိတ်ကို ဖျောက်ထားကြသည်။ ရှားရှားပါးပါး လက်ဖက်သုပ်စားရသည်။ အဲတာ ယမုန်နာဆေးခန်းဟုခေါ်သည်။